काठमाडौंका सडक अस्तव्यस्त : सरोकार पक्ष किन मौन? – दैलो न्युज । न्याय र समानताको संवाहक
काठमाडौंका सडक अस्तव्यस्त : सरोकार पक्ष किन मौन?
माघ १२, २०७३ ०६:४३ मा प्रकाशित
इसरोकार संवाददाता काठमाडौं, माघ १२ । मेलम्चीको पाइप बिछ्याउन सडक खनिएपछि चाबहिल र गौशाला क्षेत्र पनि हप्तौँदेखि अस्तव्यस्त छ । बिहानदेखि बेलुकीसम्मै त्यहाँ जाम हुन्छ र धुलोले सडक कुहिरीमण्डल हुँदा मोटरसाइकलचालक नचिनिने हुन्छन् । कतिपय ठाउँमा पानी चुहावटले हिलो पनि भएको छ ।
सोमबार दिउँसो एउटा ट्रक जयबागेश्वरीनजिक यस्तै खाल्डोमा पर्‍यो । चालकले निकाल्न जोड गर्दा चक्का झन् धसिएर अगाडिको भाग ढिकीजस्तै उचालियो । ट्रक फसेपछि ट्राफिक व्यवस्थापन झन् अस्तव्यस्त भयो । तर, मंगलबार बिहान मात्र ट्रक निकाल्न सम्भव भयो ।
यो सडकखण्ड बन्न थालेको भुइँचालोअघि नै हो । तर, काम सुस्त हुँदा यात्रु र चालकले धुलो खाने मात्र होइन, ज्यानको जोखिमसमेत मोल्नुपरेको समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ ।
अनुगमन र कारबाही कसले गर्ने भन्ने जिज्ञासामा ढकालले भने, ‘अनुगमन गर्ने जिम्मा निर्देशनालयकै हो । उनीहरूसँग बुझ्दा चिसोका कारण कालोपत्रे नगरेको भन्दै आएका छन् । कालोपत्रे गर्न निश्चित तापक्रम पुग्नुपर्छ । केही तातो हुनसाथै कालोपत्रे थाल्ने उनीहरूको भनाइ छ ।’